Police Body Warn Camera ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ | OMG Solutions
ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာကိုလည်း BWV (ဗီဒီယိုဝတ်ဆင်ခန္ဓာကိုယ်) အဖြစ်လူသိများသည်သတိပေးအထူးရဲအရာရှိများအတွက်ဒီဇိုင်းဝတ်ဆင်ဗီဒီယို, အသံ, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲအသံဖမ်းစနစ်ကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကင်မရာ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားထူးခြားရဲတပ်ဖွဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသောအသုံးပြုမှုနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတစ်ကန့်သတ်အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအသုံး မှလွဲ. ဤကင်မရာများလည်းစစ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်အရပ်သားတွေလည်းအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာနှင့်သတင်းစာပညာကိုသုံးနိုင်သည်, စီးပွားရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ အခြေတည်စတဲ့အစီရင်ခံစာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကအင်အားအသုံးပြုမှုနှင့်ရဲအတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်ရောထွေးသက်သေအထောက်အထားပြသထားတယ်။
BWCs အထူးထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ထည်အဖြစ်သုံးကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ, တသံခမောက်လုံးအတွက်ဖြစ်စေ, မျက်မှန်အတွက်တပ်ဆင်ထားခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အခြားသူများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ Recorder အလားတူဒေသခံသိုလှောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြစဉ်တချို့ကကင်မရာများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များ features တွေအတူပါလာ။ အကဲဖြတ်ရေးစင်တာနှင့်အမျိုးသားပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးနည်းပညာသုတေသန (NJTR) အပါအဝင်အများအပြားအဖွဲ့အစည်းများ, သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုဝယ်ယူအတွက်အဖွဲ့အစည်းများထွက်ကိုကူညီခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများအပေါ်အများအပြားစစ်တမ်းများကောက်ယူကြသည်။ သို့သော်လေ့လာမှု device ကိုမှန်ဘီလူး, လုပ်ဆောင်ချက်ကို, GPS အသံနှင့်အခြားအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြထားတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာများကိုအထူးတမြို့လုံးကျော်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာကြီးအနှံ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အခြားဥပဒေအဘို့ထွင်းထုနေကြသည်။ သို့သော်ဤကင်မရာအရပ်သားများနှင့်ရဲအရာရှိများအကြားအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်, အသစ်သောရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာများ၏ပထမမျိုးဆက် UK ရှိ 2005 န်းကျင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံနှင့်မြင်သာတိုးမြှင့်ဖို့အမေရိကန်အတွက်အကြီးစားအကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင် 2014 ထံမှနောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ထိုနောက်မှတခြားနိုင်ငံတွေအတူတူပင်ခြေရာနောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြပြီး On-going လမ်းကြောင်းသစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်။ စောစောစီးစီးလေ့လာမှုများအပြုသဘောသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပေမယ့်ပွားရောထွေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိသည်။ အဆိုပါရလဒ်ဒေသခံအခြေအနေတွင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများများ၏လမ်းညွှန်ချက်များပေါ် မူတည်. အချို့ကွဲပြားခြားနားသောအစီရင်ခံစာများပြသလျက်ရှိသည်။ စိန်ခေါ်မှုများအများကြီးအပါအဝင်နေကြသည်:
ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သံခမောက်လုံးကင်မရာများနှစ်ဦးစလုံးဟာစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သျောလညျး, ဗွီဒီယိုများဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းထားဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်၏အမိန့်စင်တာသို့မဟုတ်တပ်စခန်းပြန်အသက်ရှင်နေထိုင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ။
ဤအကင်မရာများကိုအသုံးပြုဖို့သူရဲအရာရှိ၏အဆိုအရသူတို့ကဆန့်ကျင်ရဲကိုအကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချဖို့တာဝန်ယူမှုများနှင့်ပွင့်လင်းဖန်တီးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများသူတို့ကလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူစွပ်စွဲချက်သက်သေပြဖို့သို့မဟုတ် disproves ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကရဲလေ့ကျင့်ရေးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool ကိုဖြစ်ကြပြီးလည်းအများပြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးများကိုသက်သေအထောက်အထားပူဇော်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့များကဆန့်ကျင်ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများအတွက်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ဖိစီးမှုကိုသူတို့နှင့်အတူ overburdening အားဖြင့်အသုံးပြုသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှစ်ခုစလုံးအပေါ်အပျက်သဘောထိခိုက်ကြောင်းပြောကိုအသုံးပြုပါ။ ရဲ့အမှတ်ထံသို့ လာ. ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာများ၏အားသာချက်များကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။
သူတို့ရိုက်ကူးလျက်ရှိသည်ကြောင်းသိရှိလာသည့်အခါမလွှဲမရှောင်, လူတွေကွဲပြားခြားနားပြုမူတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများအများပြည်သူရှေ့ရဲအရာရှိများ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားပေးနိုင်ပြီးဤနည်းဥပဒေကိုလည်းအင်အားသုံးဖြစ်ရပ်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်, ရာဇဝတ်မှုနှုန်းသည်အတွက်လျော့နည်းစေရန်ဦးဆောင်အများပြည်သူအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် On-တာဝန်အရာရှိများတိုက်ခိုက်ရန်သူကလူကိုချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးသည်။ Rialto, ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများစဉ်အတွင်းရုံဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာရာဇဝတ်မှု 50% လျှောက်လျော့နည်းများ၏အချိုးအတွက်လေ့လာဖို့အရသိရသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကအရာရှိများဆန့်ကျင်တိုင်ကြားချက်အလိုအလြောကျရုံးတင်စစ်ဆေးရာနှစ်ကာလအတွင်း 28 မှ3ကနေကျဆင်းခဲ့သည်။
ကျွန်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, (တိုတောင်း PBWC အတွက်) ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ် Won ကကင်မရာပေးထားသောအချိန်အတွက်ဘာမှားသှားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်နှစ်ဦးစလုံးအသံနှင့်ဗီဒီယိုအထောက်အထားပေးပါသည်။ နည်းပညာ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိနှင့်ပြည်သူ့အဖြစ်နှစ်ဖက်စလုံးများအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ မဆိုရဲအရာရှိများအများပြည်သူထံမှမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမည်သည့်ရဲအရာရှိအပေါ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်လုပ်ရန်ကြိုးစားသူကိုဖမ်းမိပါလိမ့်မည်နေစဉ်, မည်သည့်အရပ်သားနှင့်အတူ misbehaved တဲ့သူဒီနည်းပညာကို အသုံးပြု. မော်နီတာရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးပါတီများအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံသောကွောငျ့ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအားသာချက်ထဲကတစ်ခုကရေတွက်။ ဒီနည်းပညာကိုရရှိနိုင်ပါသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားနိုင်ငံများတွင်အများအပြားရဲအရာရှိကြောင့်မှားယွင်းအပြုအမူမှရဲအရာရှိများအဖြစ်အများပြည်သူအပြစ်ပေး။
ပြည်သူ့ထံမှတောက်ပထောက်ခံမှုသင်ယူခြင်းနှင့်ပြီများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool ကို
နှစ်ခုအားသာချက်များပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာများကိုထံမှမှတျတမျးတငျထားသညျ့ဗီဒီယိုနှစ်ဦးစလုံးတည်ဆဲနှင့်အသစ်ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်တတိယရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မိုင်ယာမီရဲဌာနကဒီနည်းပညာကိုသုံးပါနှင့် 2012 ကတည်းကရဲတပ်ဖွဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြေညာရန်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေရှိခြင်း၏, လူတွေပိုပြီးလုံခြုံခံစားနေကြတယ်, နှင့်ရဲများ၏အမူအကျင့်လုံးဝအများပြည်သူဆီသို့ပြောင်းလဲခဲ့၏။ အခုတော့သူတို့ချက်ယဉ်ကျေးမူအကငျြ့မြားနှငျ့အတူပြောဆိုပါ။ ယနေ့ခေတ်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျယ်ပြန့ကင်မရာများကိုအပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်သတိပေး:
Mini ကို WIFI GPS စနစ် / 3G / 4G ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ
3G / 4G ကြိုးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ (BWC004-4G)
ပြင်ပမှတ်ဉာဏ် (BWC055) နဲ့ Mini ကိုခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ
လျှို့ဝှက်ကုဒ် + LCD ကိုအတူ Mini ကိုခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ Secure
ဤအရာအားလုံးသည်ထူးခြားသောလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုချစ်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကင်မရာရှိခြင်းရှာနေလျှင်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် omg-solutions.com။ သငျသညျကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာသူတို့ကိုမဆိုကုန်ပစ္စည်းရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းကအသုံးပြုသည်ပေမယ့်, နိုင်ငံသားများလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမရှိသဆိုးရွားသောအစီရင်ခံစာများဒီအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများသည်နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ, အရာအားလုံးအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်, ငါတို့သည်အုပ်ချုပ်မှုကိုအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ထို့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများကိုလည်းအချို့သောအားသာချက်များရှိဝတ်ဆင်ကအတည်ပြုသည်။ ဒီတော့ဒီမှာသင်သတိထားမိရန်အဘို့အအားနည်းချက်များကိုတစ်ဦးအမြန်စာရင်း (cons) ပါပဲ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များကိုကင်မရာသတိပေး နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: စက်တင်ဘာလ 26th, 2019 by admin ရဲ့
2390 စုစုပေါင်း Views စာ5Views စာယနေ့တွင်
ဆေးရုံများရှိကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာ၏အားသာချက်များ